वान डे सिरिजः वेस्ट इन्डिजले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
वान डे सिरिजः वेस्ट इन्डिजले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौंः भारत विरुद्धको एकदिवसीय सिरिजको अन्तिम एवं तेस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ ।
यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ७ः१५ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । तीन खेलको सिरिजमा भारतले १–० ले अग्रता बनाएको छ । एउटा खेल भने वर्षाका कारण रद्द भएको थियो ।
भारतको प्लेइङ–११ः रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पन्त, केदार जाधव, रविन्द्र जडेजा, खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी र युजवेन्द्र चहल ।
वेस्ट इन्डिजको सम्भावित प्लेइङ–११ः इभन लुईस, क्रिस गेल, शाई होप, निकोलस पूरन, शिमरन हिटमायर, रोस्टन चेज, जसन होल्डर (कप्तान), कार्लोस ब्रार्थवेट, फाबियन आलेन, किमो पउल र केमार रोच।
याे पनि पढ्नुस यी २ युवा क्रिकेटरले लिए रोहित शर्माको स्थान
ट्याग्स: भारत भर्सेस वेस्ट इन्डिज, रोहित शर्मा